ဘေးလွတ်ရာကို တိမ်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာ အဖွားဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတောင် လိုက်ပို့ခွင့်မရခဲ့လို့ ၀မ်းနည်းနေတဲ့ မင်းသမီးလေးပိုင်ဖြိုးသု – Cele Snap
ဘေးလွတ်ရာကို တိမ်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာ အဖွားဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတောင် လိုက်ပို့ခွင့်မရခဲ့လို့ ၀မ်းနည်းနေတဲ့ မင်းသမီးလေးပိုင်ဖြိုးသု
အှနျလိုငျးပျေါမှာလညျး ဝဖေနျခံရမှုတှတေဈခြို့ရှိခဲ့ပမေဲ့ နောကျမဆုတျဘဲ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရှိနပေေးလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားနိုငျသူလေး ဖွဈပါတယျ. ခုခြိနျမှာ ပွညျသူ့အစိုးရဖွဈတဲ့ CRPH အတှကျ ပွညျသူတိုငျးက တတျနိုငျသလောကျအလှူငှေ ထညျ့နကွေတာဖွဈပွီး ပိုငျဖွိုးသုတို့ကလညျး ပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့ကွပါသေးတယျ.လှနျခဲ့တဲ့ ၃ လလောကျတုနျးကလညျး ဒါရိုကျတာဏကွီးရဲ့မိခငျဆုံးပါးသှားတုနျးကလညျး တိမျးရှောငျနရေတဲ့ ကာလဖွဈတာကွောငျ့ မိခငျရဲ့နောကျဆူံးခရီးကိုလညျး လိုကျမပို့ခဲ့ရပါဘူး။
ဇှနျလ ၃၀ ရကျနကေ့လညျး ပိုငျဖွိုးသုရဲ့အဖှားဖွဈသူကလညျး ဘယျတော့မှပွနျမဆုံနိုငျတော့တဲ့ သံသရာခရီးကို ထှကျသှားခဲ့ပွီပဲဖွဈပါတယျ။ တိမျးရှောငျနတေဲ့ ကာလမှာဘဲခဈြရတဲ့သူတှကှေယျလှနျသှားတဲ့အတှကျလညျး ဝမျးနညျးနမှောအသအေခြာပါပဲနျော.. ပိုငျဖွိုးသုရဲ့အဖှားလဲ ကောငျးရာမှနျရာရောကျပါစလေို့ ပရိသတျကွီးနဲ့အတူ ဆုတောငျးပေးလိုကျ ပါတယျနျော…
ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေတစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်. ခုချိန်မှာ ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ CRPH အတွက် ပြည်သူတိုင်းက တတ်နိုင်သလောက်အလှူငွေ ထည့်နေကြတာဖြစ်ပြီး ပိုင်ဖြိုးသုတို့ကလည်း ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်.လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်တုန်းကလည်း ဒါရိုက်တာဏကြီးရဲ့မိခင်ဆုံးပါးသွားတုန်းကလည်း တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ကာလဖြစ်တာကြောင့် မိခင်ရဲ့နောက်ဆူံးခရီးကိုလည်း လိုက်မပို့ခဲ့ရပါဘူး။
ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကလည်း ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့အဖွားဖြစ်သူကလည်း ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့ သံသရာခရီးကို ထွက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေတဲ့ ကာလမှာဘဲချစ်ရတဲ့သူတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းနည်းနေမှာအသေအချာပါပဲနော်.. ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့အဖွားလဲ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်နော်…